Ny fonon-tànana amin'ny fonon-tànana dia manamboatra mpanamboatra sy mpamatsy | China Grooming Gloves Mitts Factory
Fonon-tànana fandefasana biby fiompy
1. Ny rantsan-tànana miompy amin'ny rantsan-tànana dimy dia tsy vitan'ny hoe mampihena ny volo manidina eny amin'ny habakabaka, fa manentana ny menaka hoditra koa ary manatsara ny fahalemen'ny palitao sy ny famirapiratan.
2.Ny tendrony malefaka an'ny fonon-tanana miendrika rantsan-tànana miompy mora foana, ny lava lava volo dia mahatonga ny volo mora esorina sy ariana.
3. Ankoatr'izay, na manana fehiloha kely na lehibe ianao, dia natao mifanaraka tsara io fonon-tànana io. Ny kofehy manara-penitra dia mahatonga azy io hifanaraka tsara amin'ny haben'ny tànana rehetra.
4. Izy io dia mety tsara ho an'ny alika sy saka lava volo lava sy fohy volo. Izy io dia mpanala volo biby fiompy tsara ho an'ny habe sy karazany rehetra.
Fonon-tanana fanesorana volo biby
1.Torohevitra vita amin'ny kodiarana dia manome fanorana malefaka malefaka.
2.Ny fitaovana an'ity fonon-tànana fanesorana volo biby ity dia malefaka sy afaka miaina, ny fehin-tànana azo ahitsy dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny tompona biby.
3.Ny lafiny velaran'i Glove dia mampihena ny volo tavela amin'ny fanaka, akanjo na ao anaty fiara.
4. Ny fonon-tànana manala volo biby dia manala ny loto, mandro ary volo malalaka amin'ny saka, alika, soavaly na biby hafa.
Fonon-tànana fanadiovan-tena amin'ny biby
Mila fikarakarana tsy tapaka ny biby fiompy mba hitazomana ny palitao amin'ny toe-javatra ambony. Ny manadio dia manala ny volo maty sy malalaka. Ny fonon-tànana fanorana fanosotra dia manosotra sy manatsara ny palitao, manala ny kitrokely ary manetsiketsika ny volon'ny volo, mampiroborobo ny fahasalamana sy ny fitomboana indray.
Saron-tànana fandefasana biby ho an'ny alika
1.I io dia iray amin'ireo fomba mora indrindra sy mahafinaritra indrindra amin'ny fikolokoloana ireo biby fiompinao mandroaka. Ny fonon-tànana miompy amin'ny alika dia manamboatra kitrokely sy tsihy ratsy fanahy rehefa misintona loto sy miala amin'ny palitao.
2.Ny fehin-tànana azo ahitsy dia mitazona tsara ny fonon-tànana amin'ny fonon-tànana mandritra ny fikolokoloana.
3.Ny famolavolana ny tsimatra loha boribory dia mitombina, izay afaka mandro ho an'ny biby fiompy ary manana ny asan'ny fanorana.
4.Ny fonon-tanana miompy amin'ny alika dia mitazona ny fahasalamany sy ny fahadiovany amin'ny fanomezana izay ilain'izy ireo isan'andro.
Fonon-tànana mandro alika
Ny volom-borona voajanahary amin'ny fandroana alika dia manala fonon-tanana malalaka ary manotra ny hoditra koa.
Ny lamba Eco dia mamafa ny korontana manodidina ny tongotra sy ny tarehy.
Ny fehikibo azo ovaina dia mifanaraka amin'ny endrika sy habe amin'ny tanana rehetra. Ny fonon-tànana alika fandroana alika dia azo ampiasaina mando na maina, volo miala eo fotsiny.
Ny fonon-tànana mandro alika dia maharitra sy maharitra ary azo sasana amin'ny milina.